अन्तर्वार्ता | newdnn.com
कुन कुन नेतालाई भेटेर के सहमति गरेर फर्किन भारतीय विदेश मन्त्री ?
काठमाडौँ, १९ माघ । भावी प्रधानमन्त्रीदेखि अहिलेका सत्ताधारी दलका नेतासम्मलाई भेटेर भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज नेपालको दुईदिने भ्रमण पूरा गरी दिल्ली फर्किएकी छिन् । बिहीबार दिउँसो ४ बजे काठमाडौँ ओर्लिएकी स्वराज २४ घण्टे भ्रमण सकेर दिउँसो ३ बजे विशेष विमानबाट नयाँ दिल्ली फर्किएकी हुन् । उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग महत्वपूर्ण…
एजेन्सी,२२ असोज । क्याटोलोनियाको स्वतन्त्रता घोषणाले कुनै असर नपर्ने स्पेनी प्रधानमन्त्री मारियन राजोएले बताएका छन् । यस्तै गतिविधि भइरहे क्याटालन क्षेत्रको स्वायत्तता स्थगन गर्ने विषयलाई नकार्न नसकिने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् । यसैगरी उनले यस विषयमा कुनै पनि मध्यस्थता जरुरी नभएको र नस्वीकारिने पनि प्रष्ट गरे । यसअघि स्पेनमा स्वतन्त्र क्याटालोनियाका लागि भएको बिबादित जनमत संग्रहपछी अखण्ड स्पेन पक्षधरले…
बर्षायाम शुरु भएपछि देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरोको जोखिम बढेको छ । यस्तोमा सरकारले आवश्यक पुर्वतयारी त गरेको छ । तर त्यो सिमित र बाढी आइहाल्यो भने पर्याप्त नहुन सक्छ । त्यसैले आफैले आफ्नो नजिकको बाढी पहिरोको जोखिमलाई ख्याल गरेर जोगिनु राम्रो हुन्छ । कोशी, राप्ती र कर्णालीमा आउने बाढीले बर्षेनी दर्जन बढी मानिसको ज्यान जाने गरेको छ । यस्तो…
प्रधानमन्त्रीले चाहे मात्रै काठमाडौँको ट्राफिक जाम हट्न सक्छ, नत्र सकिदैन
काठमाडौँ उपत्यकामा सवारीको संख्या दिनहुँ हजारौको संख्याले बढिरहेको छ । उही सडक, उही अवस्थामा चिल्ला सवारीको संख्या बढेपछि ट्राफिक प्रहरीको टाउको पनि उत्तिकै दुखाइरहेको छ । तर सम्बन्धित निकायले भने यसमा कुनै चासो देखाएको छैन । कारण, माथिल्लो तह (मन्त्रीपरिषद)बाट नै यसको पहल हुन सकेको छैन । काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन जति नै चुस्त बनाएपनि प्रधानमन्त्री अर्थात मन्त्रीपरिषदले नै नचाहेसम्म…
‘धन्न बाँचे ’ नेपालगन्ज कोहलपुर सडकखण्डमा चार वर्षअघि भएको त्यो कहालीलाग्दो घटना सम्झदैँ उनले भनिन्– ‘पत्रकारिता त्यतिकै जोखिम पनि हो । समाज रूपान्तरणको लागि गतिलो हतियार पनि ।’ दोस्रो चरणको निर्वाचनका बेला आन्दोलन चर्किएको थियो । रिर्पोटिङका लागि गएकी उनलाई आन्दोलनकारीले आक्रमण गरे । सख्त घाइते उनको नेपालगन्जमा प्रारम्भिक उपचारपछि लामो समय काठमाडौंमा भएको उपचारपछि निको भइन् । मलाई पुनःजन्म…
नेपाली शिक्षामा दुई धार प्रष्ट देखिएका छन । एउटा सरकारी र अर्को निजी क्षेत्र । सरकारी विद्यालय गुणस्तरमा खस्किदै गएका बेला निजी क्षेत्र भने फस्टाउँदै गएको छ । गुणस्तरका नाममा विद्यार्थीलाई रटाउने र घोकाउने शिक्षा दिएर अभिभावकबाट चर्को शुल्क असुल गर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकको करामत धेरैलाई पचेको छैन । तर यसको खुलेर विरोध गर्ने हिम्मत पनि निकै कमले मात्रै गरेका…
काठमाडौँ, ४ असार । १३ बर्षको उमेरदेखि नै रचनामार्फत साहित्यिक क्षेत्रमा लागेका सुरेन्द्र महर्जन ‘अमर’ पछिल्लो समयका बहुआयामिक व्यक्तित्व हुन भन्दा फरक पर्दैन । काठमाडौँको खाल्डोमा दैनिक पैसाकै हिसाबकिताब गरेर जीन्दगी बिताउने आम मानिसभन्दा उनी फरक भएर जन्मे र त्यही फरक परिचय पनि स्थापित गराए । वि.सं. २०२९ जेठ १८ गते आमा मायादेवी डङ्गोल महर्जन र बुवा जुजुभाइ डङ्गोल महर्जनको…
अक्षराङकन पद्धतिबाट एसइई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । नतिजाअनुसार डी र ई ग्रेड ल्याउने १ लाख बढी विद्यार्थीले ११ कक्षा पढ्न पाउने छैनन । उनीहरुले पुरक परीक्षा दिदा पनि आफुलाई सहजै अघिल्लो कक्षा प्रवेशमा धकेल्न सक्दैनन । विद्यार्थीलाई फेल नगराउने भन्ने तर उनीहरुको क्षमता अनुसारका काम गर्न रोक्ने सरकारको पछिल्लो पद्धतिको अहिले आलोचना भइरहेको छ । यसका बारेमा हामीले…
डा.शेखर कोइराला, नेता नेपाली कांग्रेस पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा जे जे भयो, त्यसलाई हेर्दा यो निराश हुने मत होइन । किनकि नेपाली कांग्रेसमा जसरी भागबन्डाको राजनीति, आईजीपी प्रकरण, महाअभियोग प्रकरण आदि कारणले जनमानसमा नेपाली कांग्रेसको राम्रो सन्देश गएको थिएन । भरतपुरमा उम्मेदवारी दिएर फिर्ता लिन लगाइयो, जुन ठाउँमा हाम्रो जित निश्चित थियो । यी सबै कारणको प्रत्यक्ष असर पोखरा…
नरेन्द्र रौले जेष्ठ ४, २०७४ कलाकार हरिवंश आचार्यको पहिलो पुस्तक चिना हराएको मान्छे ८४ हजार प्रति छापियो भने त्यसमा ८० हजार प्रति बिक्री भैसकेको छ । पहिलो पुस्तक प्रकाशनमा आएको चार वर्षपछि उनी फेरि उपन्यास हरिबहादुर लिएर झुल्किएका छन् । तपाईंको दोस्रो पुस्तक ‘हरिबहादुर’ भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । यतिबेला मनमा डर बढी छ कि उत्साह ? मैले रंगमञ्चमा पाइला…
‘चुनावी सुरक्षा उच्च छ, तर विप्लवबाट बढि खतरा देखेका छौँ’
३० बैशाख, काठमाडौँ । सरकारले चुनावका लागि नेपाली सेनासहितको विशेष दस्ता नै परिचालन गरेको छ । नेपाली सेनाले दुई हप्ताअघिबाट गस्ती समेत शुरु गरिसकेको छ । तर सार्वजनिक रुपमै चुनाव बहिष्कार गरेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट माओवादीबाट बढि खतरा रहेको गृहमन्त्रालयले बताएको छ । झण्डै ६५ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको सरकारले विप्लवलाई खतराको पहिलो नम्बरमा राखेर सुरक्षा व्यवस्था…
अहिले राजनीतिक शक्तिबाट मुलुकको समृद्धि नदेखेर आफैले नयाँ पार्टी खोलेर नयाँ राजनीतिक यात्रा गरेका बाबुराम भट्टराई केही दिन अघि पक्राउ परे । उनले अबका दिनमा आन्दोलन हड्ताल नगरी समृद्धिका लागी काम गर्ने बताएका थिए । तर उनी फेल खाएका छन । यसै समसामयिक विषयमा उनीसंग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : तपाईलाई प्रधानमन्त्री भइसकेको अवस्थामा पनि प्रहरीले निकै निर्मम ढंगले अपहरण…
पार्टी र समाजले अझै चिन्न नसकेकी वीरगन्जकी छोरी
मध्य नेपाल । – निलम पन्त, नेपाली कांग्रेस भन्ना साथ वीरगन्जकी शान्ती कार्की कुनै पर्याय नाम होइन । वि.सं. १९८९ मा पर्सा जिल्लाको वीरगन्ज – १६, तेजारथ टोलमा जन्मिएकी उनी सानै उमेरदेखि समाज सेवामा पनि लागेकी महिला हुन् । सुरुका दिनमा राजनीति गर्ने व्यक्तिले पनि त्यो समाजको सेवा गर्ने भन्ने नै बुझिन्थ्यो । शान्ती कार्की १५ वर्षको उमेरदेखि पञ्चायती व्यवस्थाको…
निलम पन्त, – मध्य नेपाल । मुस्लिम समूदायमा जन्मिएर पनि आफ्नो संघर्षबाट उज्वल भविष्य बनाउन अग्रसर मोमिला खातुन पछिल्लो समयमा पर्साको चर्चित नाम बनेको छ । पर्सा जिल्ला वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर-२ छपकैयामा बुबा अतिउल्लाह मिया र आमा जैनब खातुनको कोखबाट जन्मेकी मोमिला खातुन आफ्नै कडा मेहेनतबाट यति चर्चित बनेकी हुन् । सातजना बालबच्चाकी आमा समेत रहेकी खातुनको विवाह २५…